Funny – Page 11 – Cele Channel
တိုက်ရိုက်လွှင့်နေစဉ် အရှက်ရခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်(၁၀)ခု
တစ်ခါတစ်လေ မထင်မှတ်တဲ့ အမှားတွေက တိုက်ရိုက်လွှင့်နေစဉ်ဖြစ်သွားတာကြောင့် အကြီးအကျယ်အရှက်ရစရာ တွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံကို မှားကြေငြာတာမျိုး၊ ကပြနေစဉ် စကတ်ကွဲသွားတာမျိုးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Video လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦး
Posted on October 23, 2017 Author Cele	Comment(0)
“သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” “ဒီမှာ မိအေး ညည်းဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး.. ကာယကံရှင်ကဘာတဲ့လဲ ညည်းကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့လား..” “ဟင့်အင်း အမေ..သူ သိတောင်မသိသေးဘူး” “ဟင်..ဟုတ်လား ပြောပြောသမီး.. ဘယ်သူလဲ အမေ ကောင်လေးနဲ့တွေ့ပြီး.. ဒီကိစ္စတာဝန်ယူပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးမယ် အမေတို့ သားအမိအရှက်တကွဲအကျိုးနည်း မဖြစ်ခင်လေး..” “ဟင့် ဟင့် ဟီးအဟီး..” “ငိုနေလို့ မပြီးဘူးသမီး အမေတို့သားအမိ ဒီရွာလေးမှာ ပန်းစိုက်ရောင်းပြီး.. ရိုးရိုးသားသားနေလာခဲ့တာ.. မုဆိုးမသမီးဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တာတော့.. အမေမခံဘူး သမီးရှေ့မှာအမေရှိတယ်:” မိခင်ရဲ့ရင်နင့်သံနဲ့ပြောစကားကြောင့်.. မိအေးရင်ထဲ လှိုက်ကနဲဝမ်းနည်းသွားပြီး.. ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးလေတော့သည်..။ ပြီးမှ…တိုးလွှလွှအသံလေးနဲ့… “အဟင့် ဟင့် ဟိုဟို..ဆရာလေး.. ကိုပိုင်စိုး” “ဘာ ဘယ်လို..” “ဒါ ဒေါင်းယောင်ဆောင်တဲ့မြေခွေးပဲ” စိတ်ထဲရှိသလိုရေရွတ်လိုက်သည်..၊ […]
Posted on October 22, 2017 Author Cele	Comment(0)
မှတ်ချက် / ပုံနဲ့မသက်ဆိုင်ပါ [ 18 နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ရန် ] ကျမ အိပ်ပျော်လုလု အချိန်မှာ သူရောက်လာတယ် တနေကုန်အလုပ်မှာ ပင်ပန်းထားတော့ ကျမအရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ။ သူ့ကို တွန်းလှန်ဖို့ရာ အင်အားမရှိဘူး သူက . . . . . ကျမတစ်ကိုယ်လုးံ ခြေဆုးံ ခေါင်းဆုးံ လိုက်ကြည့်တယ် သူ့လက်တွေ ခြေတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ကျည်စယ်နေတယ် အသံကလည်း ဗလုးံပထွေးနဲ့ ဘာတွေမှန်းလည်း မသိပါဘူးရှင် ။ ပြီးတော့ . . . . . . . . . ကျမ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်နေရာရောက်တော့ သူ …. သူ …… […]
Posted on October 21, 2017 Author Cele	Comment(0)
တရုတ်ဆရာဝန်များ အချဉ်မှတ်လို့ 😜😜😜
တရုတ်နိုင်ငံက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်လာတယ်။ တစ်လကြာတဲ့အချိန်ထိ အလုပ်ရှာမရတာနဲ့ အခန်းငှားပြီး ဆေးခန်းတစ်ခု ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဆေးခန်းအပြင်မှာ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ထောင်ထားလိုက်တယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာ ခုလို စာရေးထားတယ်။ – “ဆေးတစ်ခါကု ဒေါ်လာ ၂၀ ပါ။ ကုသလို့ မပျောက်ကင်းရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပြန်ပေးမည်” အမေရိကန်ရှေ့နေတစ်ယောက်ဟာ ဆေးခန်းရှေ့က ဖြတ်သွားရင်း ဒေါ် ၁၀၀ အလကားရပြီဆိုပြီး ဆေးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ တရုတ်ဆရာ ….. “ဘာဖြစ်လို့လဲ” ရှေ့နေ …………. “ကျွန်တော့်လျှာဟာ အရသာ ခံစားလို့ မရလို့ပါ” တရုတ်ဆရာ ….. “သူနာပြုဆရာမရေ ဆေးပုလင်း နံပါတ် ၂၂ က ဆေးရည်ကို သူ့လျှာပေါ်ကို အစက် ၃ စက် ချပေးလိုက်ပါ” […]
Posted on October 21, 2017 February 13, 2018 Author Cele	Comment(0)
မင်္ဂလာဦီးည က မျှော့နက်မည်းကြီး
အားးးး ​အော်​သံကြား​ပေမဲ့ဒါသဘာဝပဲ​လေဆိုပြီးအိမ်​သားများမသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​​နေလိုက်​သည်​​မင်္ဂလာဦီးည​ပေးကိုးးးးး​အော်​သံကြားပြီးသိပ်​မကြာလိုက်​လူပြိုကြီး​င​နောင်​အသံနက်​ကြီးဖြင့်​“အ​မေနဲ့အ​ဖေတို့​ရေလာကြပါဦီးဘာဖြစ်​သွားလဲမသ်ိဘူး´´ “ဟာဒုက္ခ​တော့များပြီနဲ့တူတယ်​ ​ယောက်ျား​ရေ​တော့သားကိုသွားကြည့်​ဦီး´´သိပ်​မကြာလိုက်​အ​ဖေဖြစ်​သူမှထပ်​​အော်​ပြန်​သည်​“မင့်း​ချွေးမသတိမလည်​​တော့ဘူးဟ ဆရာဝန်​အမြန်​​ခေါ်´´ဘာ​တွေဖြစ်​ကုန်​လဲမသ်ိ ကိုယ်​လဲတက်​မကြည့်​ရဲ ​သွေးသန်​ရဲရဲ​တွေမမြင်​ရဲဘူး အိမ်​ထဲကရုပ်​ရုပ်​သည်းသည်းအသံ​တွေ​ကြောင့်​​​ဘေးအိမ်​ကလူများပါ​ရောက်​လာကြသည်​သိပ်​မကြာလိုက်​ “လမ်းဖယ်​လမ်းဖယ်​ ဆရာလာပြီ´´အ​ဖေကြီးက“မင်းဘာလယ်​လိုလုပ်​လိုက်​တာလဲ ဆရာ့ကို​ပြောပြလိုက်​´´ “ကျွန်​​တော်​ဘာမှမလုပ်​ရ​သေးဘူးဆရာရဲ့ ကန်​​တော့ပါရဲ့ကျွန်​​တော်​ကလဲ ညအိပ်​ဖို့ ပုဆိုးလဲ​နေတုန်းသူကထ​အော်​ပြီးသတိလစ်​သွားတာပဲ´´“နှလုံး​တော့ခုံ​နေ​သေးတယ်​ အသက်​ရှိ​သေးတယ်​ ​သွေးအားနည်း​နေ​တော့​ဆေးချိတ်​​ပေးခဲ့လိုက်​မယ်​´´“​ကောင်းသလိုသာလုပ်​ပါဆရာ´´“နိုးလာမှဘာဖြစ်​လဲ​မေးကြည့်​​ပေါ့´´အ​မေက“နင်​အ​တော်​​မွှေတဲ့​ကောင်​ ဆိုပြီးရှက်​ကိုးရှက်​ကန်းနှင့်​ထွက်​သွား၏´ ´မိုးစင်​စင်​လင်းသွားမှငတိမကနိုးလာပြီး ပြူးတုပြူးပြဲဖြင့်​အိပ်​ယာခြင်​​ထောင်​​တွေလိုက်​လှန်​​လှောရှာ​နေ​လေ၏“သူ့​ဘေးနားကလူ​တွေကိုဂရုမစိုက်​အား​သေး အ​မေက သမီးဘာရှာ​နေလဲ​မေးလိုက်​​တော့မှ ​​“မျှော့´´“ဘယ်​က​မျှော့လဲ´´“ညက​လေသူပုဆိုးလဲ​နေတုန်းက သူ့​ပေါင်​ကြားမှာ​မျော့ကြီးကပ်​​နေတာလက်​သန်းလုံး​လောက်​ရှိတယ်​ ​မျော့ဆိုအရမ်း​ကြောက်​လို့ အိပ်​ယာထဲရှိ​သေးလားလိုက်​ရှာ​နေတာ´´ တ်ိန်​´´´´´´´´ ထိုအချိန်​မှ င​နောင်​မှာ ငပဲဟုအမြည်​တွင်​သွား​လေ​တော့သတည်းးးး Credit – original writer
Posted on October 9, 2017 Author Cele	Comment(0)
Posted on September 19, 2017 Author Cele	Comment(0)